သင့်တစ်ဘဝလုံး လက်ကိုင်ကျင့်သုံးသင့်တဲ့ ရိုးရှင်းသော ၉ဝ/၁ဝ နိယာမ – Trend.com.mm
သင့်တစ်ဘဝလုံး လက်ကိုင်ကျင့်သုံးသင့်တဲ့ ရိုးရှင်းသော ၉ဝ/၁ဝ နိယာမ
Posted on June 20, 2018 March 15, 2019 by Wint
နာမည်ကြီး စာရေးဆရာ Stephen Covey ရဲ့ “the 90/10 principle” နဲ့ စာဖတ်သူများကို
မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ ဒီနည်းလမ်းကို သိပြီးသားလူတွေလည်းရှိသလို၊ မသိသေးတဲ့လူတွေအတွက်လည်း ဘယ်လိုအသုံးချသွားရမယ်ဆိုတာကို ဥပမာလေးတွေနဲ့တကွ ရှင်းပြပေးသွားမှာပါ။ ဘယ်လောက်ထိ အလုပ်ဖြစ်လဲဆိုတာ သင်ကိုယ်တိုင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးပြီးရင် သိလာပါလိမ့်မယ်။
၉ဝ/၁ဝ နိယာမ ဆိုတာဘာလဲ ?
ဘဝမှာ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေထဲက (၁ဝ)ရာခိုင်နှုန်းကို ကျွန်တော်တို့မှာ ထိန်းချုပ်
နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ ပစ္စည်းတစ်ခု ပျက်စီသွားခြင်း (သို့) လေယာဉ်နောက်ကျတဲ့ ကိစ္စမျိုးတွေဆို
ကျွန်တော်တို့မှာ ဘာမှလုပ်နိုင်စွမ်းမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလိုအရာတွေပေါ်ထားရှိတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ 
အတွေးအခေါ်တွေ ၊ တုံ့ပြန်မှုတွေကိုတော့ ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်။
အခြား (၉ဝ)ရာခိုင်နှုန်းဟာ ကျွန်တော်တို့ တုံ့ပြန်မှုရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။
ဒီ ဥပမာလေးကို တစ်ချက်လောက် မျက်လုံးထဲမြင်ယောင်ကြည့်ပါ…
တစ်ရက်မှာ မိသားစုနဲ့အတူ သင်မနက်စာစားနေတယ်။ သင့်ရဲ့သမီးကြောင့် မထင်မှတ်ပဲ ကော်ဖီခွက်မှောက်သွားပြီး အကျီ င်္ကိုလာစင်မယ်။ သင်ခုန်ထလိုက်ပြီး ကလေးကိုအော်မယ်။ ဒီလိုအလွယ်တကူပြုတ်ကျအောင် ခွက်ကိုထားထားတဲ့ မိန်းမဖြစ်သူကိုလည်း လှမ်းဟောက်လိုက်ပြီး အကျီ င်္လဲဖို့ အခန်းထဲပြန်ဝင်သွားမယ်။ ပြန်လည်းထွက်လာရော တရှုံ့ရှုံ့ငိုနေပြီး မနက်စာတောင် ဝအောင်မစားပဲ ကျောင်းသွားဖို့ပြင်ဆင်နေရတဲ့ ကလေးကို တွေ့မယ်။ ဒါဟာ သင့်အကျီ င်္ပေါ် မတော်တဆဖိတ်စင်လာတဲ့ ကော်ဖီတွေကြောင့် တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ အပြုမူနော်။
ရလဒ်အနေနဲ့ ကလေး ကျောင်းကားနောက်ကျမယ်။ သင့်ဇနီးလည်း အလုပ်မမှီလို့ အမြန်ပြေးရ
တယ်။ ကလေးကျောင်းကားမမှီလို့ သင်ကလိုက်ပို့ပေးရဦးမယ်။ သင်လည်း အလုပ်နောက်ကျမယ်။ ရုံးမှာအရေးကြီး တင်စရာရှိတဲ့ စာရွက်စာတမ်းတွေလည်း မနက်ကဒေါသထွက်နေတာနဲ့မေ့ကျန်ခဲ့တယ်။ နေ့တစ်နေ့ရဲ့အစမှာပဲ စိတ်ပျက်စရာတွေကြုံရပြီ။ တစ်နေ့လုံး စိတ်အခြေအနေသာယာတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ အိမ်ပြန်ရောက်တော့လည်း မိန်းမနဲ့ ကလေးကို နှုတ်ဆက်ပေမယ့်မနက်ကအရှိန်က သင်တို့ကြားမှာ တင်းမာမှုတွေဖြစ်ရတယ်။
ဘာလို့ ဒီလိုဖြစ်ရတာလဲ ?
၁ . သင့်သမီးက ကော်ဖီမှောက်လိုက်လို့
၂. ကျောင်းကားလွတ်သွားလို့ ကလေးကိုကျောင်းလိုက်ပို့ပေး
၃. မီးပွိုင့်တွေမိနေတာနဲ့ အလုပ်နောက်ကျသွားတာ
၄. ဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ် မှားယွင်းစွာတုံ့ပြန်မိလို့
အဖြေမှန်က နံပါတ်(၄)ပါ။ မိသားစုကြား အခြေအနေတင်းမာအောင် ၊ သင့်ရဲ့နေ့တစ်နေ့ မသာယာအောင်ဖျက်ဆီးလိုက်တာ သင်ကိုယ်တိုင်ပါပဲ။ မတော်တဆမှောက်သွားတဲ့ ကော်ဖီကို သင်ဘာ
မှလုပ်လို့မရဘူး။ ဒါပေမယ့် သင့်စိတ်ခံစားချက်ကိုတော့ ထိန်းချုပ်နိုင်တယ်။
ဒီလိုဆိုရင်တော့ ခုနကလို ဟုတ်ချင်မှ ဟုတ်မယ်။
ကော်ဖီတွေ သင့်ဘောင်းဘီပေါ်မှောက်ကျလာတယ်။ ဆူခံရတော့မယ်ဆိုတာသိတဲ့ သင့်ကလေး
က မျက်ရည်အ၀ိုင်းသားနဲ့ ။ ဒါပေမယ့် သင်က ” ဘာမှမဖြစ်ဘူး .. နောက်ခါဂရုစိုက်နော် သမီးလေး ” လို့ ချိုချိုသာသာပြောလိုက်တယ်။ အခန်းထဲသွား အကျီ င်္လဲ ၊ အလုပ်အတွက်လိုအပ်တဲ့ စာရွက်တွေယူပြီး ပြန်ထွက်လာခဲ့တယ်။ သင်ထမင်းစားခန်းထဲပြန်သွားတော့ ကလေးကို ကျောင်းကားပေါ်တက်ခါနီး သင့်ကိုလက်ဝှေ့ယမ်းနှုတ်ဆက်ပြနေပြီ။ သင်လည်း မနက်စာစားပြီးတာနဲ့ မိန်းမကိုနှုတ်ဆက်ပြီး စိတ်ကြည်လင်စွာနဲ့ပဲ အလုပ်ကိုအချိန်မှန်ရောက်လာတယ်။ အဲ့ဒီနေ့ တစ်နေ့ဟာ သင့်အတွက်သာယာသွားပါပြီ။
ကဲ.. ဘယ်လိုအမူရာမျိုးနဲ့ အခြေအနေတစ်ခုကို တုံ့ပြန်မလဲဆိုတာ သင့်အပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်။
သင့်ရဲ့ပြဿနာတွေ၊ အခက်ခဲတွေကို အခြားသူအပေါ် အပြစ်တင်ချင် တင်လို့ရတယ်။ အဲ့လိုအပြစ်တင်လိုက်ရုံနဲ့ အဖြေရသွားပြီလားဆိုတာ စဉ်းစားပါ။
မှန်ကန်စွာ တုံ့ပြန်နိုင်တတ်တဲ့ အကျင့်မွေးပါ။ ဒါဆို သင့်ရဲ့တစ်နေ့တာကို ဘယ်တော့မှ ဖျက်ဆီး
လေယာဉ်နောက်ကျတယ်။ တစ်နေ့တာ အချိန်ဇယားတွေတော့ ပျက်စီးကုန်ပြီ။ ဒေါသထွက်ပြီး လေဆိပ်က ဝန်ထမ်းတွေကို ပြဿနာသွားမရှာပါနဲ့။ ဒါသူတို့ရဲ့အမှားမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကို အော်ဟစ်ရန်ရှာပြီး အချိန်ကုန်မယ့်အစား ကိုယ့်အတွက်အကျိုးရှိမယ့်အရာတစ်ခုကိုလုပ်နေလိုက်ပါ။ ဥပမာ- စာအုပ်ဖတ်နေတာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ ၉ဝ/၁ဝ နိယာမအတိုင်း သင်လိုက်နာကျင့်သုံးလို့ ဘယ်တော့မှ နောင်တရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ဆန့်ကျင်ဘက်ကို စဉ်းစားပါ။ ရလဒ်တွေအတွက်
သငျ့တဈဘဝလုံးအတှကျ အကြိုးရှိစမေယျ့ ရိုးရှငျးသော ၉ဝ/၁ဝ နိယာမ
နာမညျကွီး စာရေးဆရာ Stephen Covey ရဲ့ “the 90/10 principle” နဲ့ စာဖတျသူမြားကို
မိတျဆကျပေးခငျြပါတယျ။ ဒီနညျးလမျးကို သိပွီးသားလူတှလေညျးရှိသလို၊ မသိသေးတဲ့လူတှေ
အတှကျလညျး ဘယျလိုအသုံးခသြှားရမယျဆိုတာကို ဥပမာလေးတှနေဲ့တကှ ရှငျးပွပေးသှားမှာပါ။
ဘယျလောကျထိ အလုပျဖွဈလဲဆိုတာ သငျကိုယျတိုငျလကျတှကေ့ငျြ့သုံးပွီးရငျ သိလာပါလိမျ့မယျ။
ဘဝမှာ ဖွဈပကျြနတေဲ့အရာတှထေဲက (၁ဝ)ရာခိုငျနှုနျးကို ကြှနျတျောတို့မှာ ထိနျးခြုပျ
နိုငျစှမျးမရှိပါဘူး။ ပစ်စညျးတဈခု ပကျြစီသှားခွငျး (သို့) လယောဉျနောကျကတြဲ့ ကိစ်စမြိုးတှဆေို
ကြှနျတျောတို့မှာ ဘာမှလုပျနိုငျစှမျးမရှိပါဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဒီလိုအရာတှပေျေါထားရှိတဲ့ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ 
အတှေးအချေါတှေ ၊ တုံ့ပွနျမှုတှကေိုတော့ ထိနျးခြုပျနိုငျတယျ။
အခွား (၉ဝ)ရာခိုငျနှုနျးဟာ ကြှနျတျောတို့ တုံ့ပွနျမှုရဲ့ရလဒျတှဖွေဈပါတယျ။
ဒါလေးကို တဈခကျြလောကျ မကျြလုံးထဲမွငျယောငျကွညျ့ပါ…
တဈရကျမှာ မိသားစုနဲ့အတူ သငျမနကျစာစားနတေယျ။ သငျ့ရဲ့သမီးကွောငျ့ မထငျမှတျပဲ
ကျောဖီခှကျမှောကျသှားပွီး အကြီ င်ျကိုလာစငျမယျ။ သငျခုနျထလိုကျပွီး ကလေးကိုအျောမယျ။
ဒီလိုအလှယျတကူပွုတျကအြောငျ ခှကျကိုထားထားတဲ့ မိနျးမဖွဈသူကိုလညျး လှမျးဟောကျလိုကျ
ပွီး အကြီ င်ျလဲဖို့ အခနျးထဲပွနျဝငျသှားမယျ။ ပွနျလညျးထှကျလာရော တရှုံ့ရှုံ့ငိုနပွေီး
မနကျစာတောငျ ဝအောငျမစားပဲ ကြောငျးသှားဖို့ပွငျဆငျနရေတဲ့ ကလေးကို တှမေ့ယျ။
ဒါဟာ သငျ့အကြီ င်ျပျေါ မတျောတဆဖိတျစငျလာတဲ့ ကျောဖီတှကွေောငျ့ တုံ့ပွနျလိုကျတဲ့ အပွုမူ
ရလဒျအနနေဲ့ ကလေး ကြောငျးကားနောကျကမြယျ။ သငျ့ဇနီးလညျး အလုပျမမှီလို့ အမွနျပွေးရ
တယျ။ ကလေးကြောငျးကားမမှီလို့ သငျကလိုကျပို့ပေးရဦးမယျ။ သငျလညျး အလုပျနောကျကြ
မယျ။ ရုံးမှာအရေးကွီး တငျစရာရှိတဲ့ စာရှကျစာတမျးတှလေညျး မနကျကဒေါသထှကျနတောနဲ့
မကေ့နျြခဲ့တယျ။ နတေ့ဈနရေဲ့အစမှာပဲ စိတျပကျြစရာတှကွေုံရပွီ။ တဈနလေုံ့း စိတျအခွအေနေ
သာယာတော့မှာမဟုတျဘူး။ အိမျပွနျရောကျတော့လညျး မိနျးမနဲ့ ကလေးကို နှုတျဆကျပမေယျ့
မနကျကအရှိနျက သငျတို့ကွားမှာ တငျးမာမှုတှဖွေဈရတယျ။
ဘာလို့ ဒီလိုဖွဈရတာလဲ ?
၁ . သငျ့သမီးက ကျောဖီမှောကျလိုကျလို့
၂. ကြောငျးကားလှတျသှားလို့ ကလေးကိုကြောငျးလိုကျပို့ပေး
၃. မီးပှိုငျ့တှမေိနတောနဲ့ အလုပျနောကျကသြှားတာ
၄. ဖွဈလာတဲ့အခွအေနတေဈခုပျေါ မှားယှငျးစှာတုံ့ပွနျမိလို့
အဖွမှေနျက နံပါတျ(၄)ပါ။ မိသားစုကွား အခွအေနတေငျးမာအောငျ ၊ သငျ့ရဲ့နတေ့ဈနေ့ မသာ
ယာအောငျဖကျြဆီးလိုကျတာ သငျကိုယျတိုငျပါပဲ။ မတျောတဆမှောကျသှားတဲ့ ကျောဖီကို သငျဘာ
မှလုပျလို့မရဘူး။ ဒါပမေယျ့ သငျ့စိတျခံစားခကျြကိုတော့ ထိနျးခြုပျနိုငျတယျ။
ဒီလိုဆိုရငျတော့ ခုနကလို ဟုတျခငျြမှ ဟုတျမယျ။
ကျောဖီတှေ သငျ့ဘောငျးဘီပျေါမှောကျကလြာတယျ။ ဆူခံရတော့မယျဆိုတာသိတဲ့ သငျ့ကလေး
က မကျြရညျအဝိုငျးသားနဲ့ ။ ဒါပမေယျ့ သငျက ” ဘာမှမဖွဈဘူး .. နောကျခါဂရုစိုကျနျော သမီး
လေး ” လို့ ခြိုခြိုသာသာပွောလိုကျတယျ။ အခနျးထဲသှား အကြီ င်ျလဲ ၊ အလုပျအတှကျလိုအပျတဲ့
စာရှကျတှယေူပွီး ပွနျထှကျလာခဲ့တယျ။ သငျထမငျးစားခနျးထဲပွနျသှားတော့ ကလေးကို
ကြောငျးကားပျေါတကျခါနီး သငျ့ကိုလကျဝှယေ့မျးနှုတျဆကျပွနပွေီ။ သငျလညျး မနကျစာစားပွီး
တာနဲ့ မိနျးမကိုနှုတျဆကျပွီး စိတျကွညျလငျစှာနဲ့ပဲ အလုပျကိုအခြိနျမှနျရောကျလာတယျ။
အဲ့ဒီနေ့ တဈနဟေ့ာ သငျ့အတှကျသာယာသှားပါပွီ။
ကဲ.. ဘယျလိုအမူရာမြိုးနဲ့ အခွအေနတေဈခုကို တုံ့ပွနျမလဲဆိုတာ သငျ့အပျေါမှာပဲမူတညျပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ပွဿနာတှေ၊ အခကျခဲတှကေို အခွားသူအပျေါ အပွဈတငျခငျြ တငျလို့ရတယျ။
အဲ့လိုအပွဈတငျလိုကျရုံနဲ့ အဖွရေသှားပွီလားဆိုတာ စဉျးစားပါ။
မှနျကနျစှာ တုံ့ပွနျနိုငျတတျတဲ့ အကငျြ့မှေးပါ။ ဒါဆို သငျ့ရဲ့တဈနတေ့ာကို ဘယျတော့မှ ဖကျြဆီး
လယောဉျနောကျကတြယျ။ တဈနတေ့ာ အခြိနျဇယားတှတေော့ ပကျြစီးကုနျပွီ။ ဒေါသထှကျပွီး
လဆေိပျက ဝနျထမျးတှကေို ပွဿနာသှားမရှာပါနဲ့။ ဒါသူတို့ရဲ့အမှားမဟုတျပါဘူး။ သူတို့ကို
အျောဟဈရနျရှာပွီး အခြိနျကုနျမယျ့အစား ကိုယျ့အတှကျအကြိုးရှိမယျ့အရာတဈခုကိုလုပျနလေိုကျ
ပါ။ ဥပမာ- စာအုပျဖတျနတောဖွဈဖွဈပေါ့။ ၉ဝ/၁ဝ နိယာမအတိုငျး သငျလိုကျနာကငျြ့သုံးလို့
ဘယျတော့မှ နောငျတရမှာမဟုတျပါဘူး။ ဆနျ့ကငျြဘကျကို စဉျးစားပါ။ ရလဒျတှအေတှကျ
BTS နဲ့အတူ ပူပေါင်းလက်တွဲပြီး အလုပ်လုပ်သွားဖို့ရှိကြောင်းပြောပြလာတဲ့ Shawn Mendes
Kwang ကတော်တွေ ဒီသတင်းဖတ်ပြီးရင် စိတ်အေးပါ့မလား 😊